Go’aanka ay qaateen Rooble iyo madax goboleedyada oo kasii daraya xiisadda dalka – CNN SOMALI
Muqdisho (CNN SOMALI) – Tan iyo markii ay Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ay qaadaceen hanaanka doorashada dalka, gaar ahaan midda Golaha Shacabka ayaa waxaa isa-soo taraya walaaca iyo cabsida laga qabo in dalka ay ka dhacaan rabshado.
Dhinacyada siyaasadda isku haya ayaa si weyn iskugu khilaafsan wadadii loo mari lahaa xal u helida hanaanka doorashada, xilli ay mucaaridka doorashada socota ku tilmaameen mid boob iyo sharci darro ah.
Mucaaradka ayaa doonaya in guud ahaan doorashada la joojiyo, la baabi’iyo dhammaan kuraastii horey loo doortay, wax walbana hadda iyo kow laga soo billaabo. Balse Rooble iyo madax-goboleedyada ayaa ku adkeysanaya in doorashada sii socoto, balse la saxo khaladaadka jira.
Fallan-qeeyayaasha siyaasadda ayaa qaba in go’aanka aamusnaanta ee uu qaateen Madasha Wada-tashiga Qaran oo ay ku mideysan yihiin hogaanka dowlad goboleedyada dalka iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay uga sii dareyso dareyso xaalada hubanti la’aanta ee ka taagan dalka.
Madasha Wada-tashiga Qaranka ayaa ku guuldareystay inay iskugu yimaadaan kulan lagu xalinayo tabashada laga qabo hanaanka ay ku bilowdeen doorashada waqtigeeda uu dib uga dhacay ee ka socota dalka, kulankaas oo ay dalbadeen mucaaradka.
Rooble ayaa aqbalay soo-jeedintii Midowga Musharaxiinta Soomaaliya ee aheyd in la isugu yimaado shir ku saabsan doorashooyinka dalka, hase yeeshee shirkan ayaa waxaa diidan xubanaha kale ee Madasha Wada-tashiga Qaran, gaar ahaan Axmed Qoor Qoor iyo Cabdicasiis Lafta-gareen, oo si aad ah ugu xiran madaxtooyada Soomaaliya.
Rooble oo si weyn loogu soo dhoweeyey Jabuuti